Toka-maso an-tanin’ny jamba • AoRaha
Toka-maso an-tanin’ny jamba
Vao andro vitsy laza izay isika no niresaka ny olan’ny famatsiana herinaratry ny orinasa Jiro sy rano malagasy (Jirama) dia efa mitroatra sahady indray izao ny mpanjifa momba ny faktiora. Tsy nisy tsy nimenomenona ny isantokantrano raha vao nandray ilay faktiora faharoa nalefan’ny orinasa tamin’ity volana mey ity. Asa na manao fanahiniana, na koa manao tsindrio fa lavo fa dia tafahoatra loatra ny vola takina amin’ny mpanjifa.
Izany tokoa no hoe: « tsy mankaiza eo ireo fa izay tianay hatao ihany no ataonay! ». Manao toy ny toka-maso manjaka an-tanin’ny jamba ka manararaotra dia manao izay danin’ny kibo. Toa tsy nodinihina lalina akory ireo kajikajy amin’ny fandanian’ny isan-tokantrano fa napetrapetraka araka izay tiana hanaovana azy ny fandaniana ao anaty faktiora. Mody safosafoina amin’ny hoe « tsy manao relevée » ireo mpaka tarehimarika dia avy eo mamely tampoka mampidangana ny vola haloa ao anaty faktiora. Betsaka ny mpanjifa no misafoaka vokatr’izany. Tsy vitsy amin’ireo mpiasan’ny Jirama no manao tari-dositra rehefa manontany momba ny antony mampidangana tampoka ny vidin-jiro sy rano ny mpanjifa. Valy boraingina aza no ataon’ny sasany.
Fa angaha moa tsy maintsy ny mpanjifa foana izany no terena ankolaka hanentsina ireo lavaka be ao amin’ny Tahirimbolan’ny Jirama, vokatry ny tsy fahaiza-mitantana sy ny fanodinkodinam-bola samihafa ataon’ireo mpitantana sasany hatramin’izay? Ekena fa misy ny paikady hoentina manarina ity orinasam-panjakana ity saingy, angamba, tsy ny fanabotriana vahoaka no vahaolana! Mba hajao ihany ny zon’ny mpanjifa ary ataovy ara-drariny sy hitsiny ny kajy amin’ny faktiora na dia tsy manana afa-tsy ny Jirama aza ny Malagasy e!
Tsy ratsy ny manova famindra
Fa inona àry ity ry Jirama?
« Mamba » tsy hasolo « voay »!